Chisingakanganwiki Chinovhara Peni
Matipi mashoma ekuchenesa inki iwe unofanirwa kuziva
Paunenge uchishandisa peni kana chinyoreso, Zviri nyore kuibvisa kana ukasangwarira ingi yehembe, Kana iyo ink yangovepo, zvinonetsa kuishambidza. Kuti uone nguo yakanaka yakasvibiswa, Hazvina kugadzikana. Kunyanya mumavara akareruka, Handizive maitiro ekubata w ...
Chinyoreso chinodzora mvura neingi inoshandiswa mucolorcolor
ne admin pane 2021-07-14
Inki uye mvuracolor musanganiswa wekare. Mitsara yakapfava inogona kupa iyo watercolor basa rakaringana chimiro, senge muVincent Van Gogh's Fishing Boats paGungwa. Beatrix Potter akashandisa simba rine simba rekuburitsa mvura yemvura uye yakapfava pfungwa yevara kuzadza Nzvimbo pakati pemitsara mu ...
Kwazisa noushamwari pakupedzwa kwechikamu chechipiri cheObooc Industrial Park
Musi waJune 12, 2021, takaungana muMinqing, Fuzhou, takatangisa mune yakakosha nguva munhoroondo yekuvandudza kweAuboz. Isu takabata mutambo wepamusoro wekusimbisa wechipiri chikamu chirongwa cheFujian Auboz New Material Technology Co, Ltd muMinsin Gold Industrial Zone. Nekunakidzwa uye j ...
Fuzhou Nyowani Korona Mushonga Wasvika !!
ne admin pane 2021-06-21
Kunyangwe hosha iyi ichinyatso kudzorwa munyika, vanhu vachiri kutapukirwa nguva nenguva, uye kubaiwa mushonga ndiyo nzira yakanakisa yekuzvidzivirira. kubaiwa kweiyo coronavirus nyowani, se ...
Ink-jet inodhinda matambudziko akajairika uye diki nzira dzekugadzirisa
Inkjet printer ikozvino hofisi yedu yakakosha mubatsiri akanaka, iyo printer iri nyore kushandisa, asi muprinta kana paine dambudziko tingaite sei nayo? 】 Dhinda nemitsetse yakatwasuka (zvidimbu zvidiki), kana ...
Kurumidza kudzidza zvinhu zvekutanga zvekudhirowa kwepeni uye kupenda kwepasirese, uye huya kunzvimbo yekutora nenzira inotonhorera
Mamiriro ekunze asina kujeka anoita kuti basa riwedzere uye rinofinha, munhu wese achitsumwaira, haakwanise kusimudza mweya, panguva ino, unouya kuzonakidzwa nemimwe mifananidzo yakanaka yekumutsa uropi hwako Mushure mekuona mufananidzo wakanaka kudaro, ichokwadi here kuti moyo wemunhu wese aporeswa uye mweya wamuka ...
OBOOC # Iyo 2021 China Kuyambuka muganho E-commerce Fair iri mukutenderera kuzere
ne admin pane 2021-04-21
Kusvikira 17: 00 pa18, Vanhu 43,068 vanodarika mharadzano. Yakanga iri slam huru ~~ Nhasi izuva repiri rerunyararo. Kuti ushumire zvirinani vatengi, Shamwari dzedu ndedzekutanga Vakauya kunzvimbo yekuratidzira yekugadzirira kwekutanga ~ Mr. Liu Qiying, Sachigaro weobooc Nyowani Mat ...
ERUSE Shanghai International Emergency uye Anti-denda Zvinhu Exhibition yakakunda yayo yekutanga hondo!
ne admin pane 2020-11-07
Mukupindura kune nyowani korona hutachiona hutachiona, kambani yedu yakagadzira iyo green green brand Eruse nesimba rayo rakasimba. Chikunguru 15-16, 2020, inotsigirwa neChina Chamber yeInternational Commerce Shanghai Chamber of Commerce (Shanghai Chamber yeInternational Commerce), Shanghai International ...
Gamuchirai vamiriri vemakongiresi evanhu pamatanho ese epurovhinzi, guta, County uye taundi kuti vaongorore nekutungamira AoBoZi
Musi waChikumi 29,2020, Aobozi Industrial Park, iyo yakaiswa zviri pamutemo mukugadzira, yakatambira kwaziso dzechokwadi kubva kuvamiriri vemakongiresi evanhu kumatunhu ese epurovhinzi, guta, County uye taundi. Panguva imwecheteyo, izvi zvinoratidzawo kuti nyika yanga ichiteerera ...
Welcome to Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
Fujian AoBoZi Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2007. Kambani yedu ndeye yepamusoro-tech kambani inoshanda muR & D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi inoenderana yekutsikisa zvinoshandiswa. Tevedzera tekinoroji yepamberi yekunze, zvigadzirwa zvaro zvinosangana nemamiriro ekuyedzwa ezvakatikomberedza eUnited ...
Indelible Election Ink (sirivheri nitrate yesarudzo inki) uye isingadzimiki chiratidzo iyo yakashandiswa kuParamende kana Mutungamiri Kuvhota muAfrica neAsia nyika dzine mhando yakanaka uye mutengo ndicho chinangwa chedu chikuru.